Kwidziridzo: Gunyana 21, 2020 (6:30 AM ET): Vhidhiyo-pamavhidhiyo uye vhidhiyo yekusimudzira yeGPS S20 FE ikozvino yaburitsa ichitsigira mamwe akambotaurwa maficha uye maficha. Bhura pasi kuti uone zvese zvakadzama!
Chinyorwa chekutanga: Chikunguru 23, 2020 (8:37 AM ET): Samsung yekutengesa mureza ndeye kutsvedza. Sekudikanwa kwemidziyo inodhura inodonha nekuda kwekukwira kwemitengo uye chirwere chiri kuenderera mberi, tiri kuona vamwe vagadziri vachiburitsa dzimwe nzira dzepakati Samsung inogona kuve yazvino.
Zvinoenderana nemishumo yakawanda, kambani parizvino iri kushanda pakudzokorora kwayo Galaxy S10 Lite zvichibva pane iyo Galaxy S20 renji. Izita rayo repamutemo richiri kukakavadzana, asi kunyangwe ichizonzi Galaxy S20 Lite kana Galaxy S20 Fan Edition, hezvino zvese zvatinofunga isu tinoziva nezve iri kuuya inokwanisika foni pazasi.
Zita uye zuva rekuburitsa
Iyo Galaxy S20 Fan Edition inonzi iri kuvandudzwa nenhamba dzemhando SM-G780 (yepasi rose vhezheni) uye SM-G781 (US vhezheni), sekureva kwe SamMobile mushumo kubva munaJune 11. Iyo Galaxy S10 Lite yakaburitswa ine modhi nhamba SM-G770, saka zvese zviratidzo zvinonongedzera kune imwe nhanho kune icho chakati mudziyo.
Samsung yakazosimbisa kuvepo kweiyo Galaxy S20 FE akateedzana mune izvo zvinoita kunge imwezve netsaona inoratidza. Iyo kifaa chakaonekwa mune yakanyorwa pane Samsung Bulgaria's YouTube Premium peji rekupa, iyo yakasimbisa zita rayo. Rondedzero iyi yakasimbisawo kuti Samsung iri kugadzirira 4G uye 5G zvakasiyana zveGPS S20 FE.
Zvichakadaro, zita rekuti "Galaxy S20 Lite" iri kukwikwidza uye rakaonekwa pairi Samsung webhusaiti yeUS ne Twitter tipster Venkatesh Babu.G. Zvinogoneka kuti Samsung ichave iine zita rakasiyana renhare mumisika dzakasiyana. Nekudaro, izvo zvakare hazvisi kunze kwenzvimbo yekugona kuti idzi mbiri mafoni akasarudzika asina chekuita nemumwe.
Related: Samsung Galaxy S akateedzana - Nhoroondo yezita hombe mu Android
The Shanduro yeV fan zita rakatanga kushandiswa naSamsoni pachigadzirwa chakaburitswa patsva zvichibva pa Galaxy Note 7. An ETNews Chirevo chakaratidzawo kuti runhare runogona kuuya neS-Pen rutsigiro uye riite zita rekuti "Galaxy S20 Pen Edition", asi zvingangoita kuti iyi yaive nyaya yekusaturikira zvakanaka.
Musi waSeptember 8, iyo SM-G780F musiyano yakaonekwa ichipfuura neiyo FCC. Inotendwa kuve yakasarudzika yepasirese yepasi rose, rondedzero yakamutsa mibvunzo nezve kufambiswa kuri padyo nefoni
On September 9, iyo smartphone yakaratidza kwekutanga paSamsoni yePhilippines saiti. Kwete zvakawanda nezve chishandiso chakanyorwa, bhara iyo 128GB yekuchengetera, mbiri SIM rutsigiro, uye maviri macolourways, ndicho chingangodaro chiratidzo chakanyanya kusvika parizvino kuti kuvhurwa kweGPS S20 FE kwave kuswedera pedyo.
Samsung musi waGunyana 13 yakasimbisa chimwe chiitiko chisina Unpacked chichaitika mwedzi uno, pamwe ichabata kutanga kweGPS S20 FE. Chiitiko ichi chichaitika munaGunyana 23, kutanga na10 AM ET. Kunyange zvisiri kunyatso kusimbisa kuti iyo S20 FE ichaita kutanga kwayo, mazano ose akapiwa vanokurudzira kuti foni iite mamiriro ayo akamirirwa kwenguva refu.
Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Dhizaini
Isu tanga tichitarisira iyo Galaxy S20 Fan Edition kuti itore dhizaini dhizaini kubva kune hanzvadzi dzayo dzeS20 uye kana kupihwa kwakaburitswa kuchizotendwa, zvinodaro. Tipster Evan Blass yakaburitsa iyo inopa inoratidza inozivikanwa Infinity-O punchi-gomba ratidziro yakakomberedzwa neatete bezels. Unogona kuona iyo yakaburitswa yeGirazi S20 Fan Edition inopa pazasi.
Dzimwe shanduro dzakadururwa Via PriceBaba uye OnLeaks musi waAugust 17, iyo inoratidza izvo zvinogona kuita kumashure dhizaini. Kunyangwe isina kusimbiswa, pane mukana wekuti Galaxy S20 Fan Edition ingashandise iyo inotonhorera mapurasitiki epaneru anoshandiswa paGreen Note 20. Pamusoro pezvo, zvinopa zvinoratidza kuti matatu makamera anozoonekwa kumashure.
A SamMobile chirevo muna Chikumi 25 chakatipa zano reruvara rwataigona kutarisirawo, irwo bhuruu, Violet, uye chena. Musi waChikunguru 23, Dutch tech kuburitsa GalaxyClub yakadonongodza mamwe matatu anogona kunge ari mumvuri, kusanganisira girini, orenji, uye tsvuku.
Vanopa vakatumirwa kune Evan Blass 'Patreon muna Nyamavhuvhu 18 (yaonekwa pamusoro) yakazivisa yakatowanda nzira yevaravara yakaiswa kunyasha iyo Galaxy S20 FE. Anosvika matanhatu anoratidzwa mukudonha, kusanganisira mwenje wakajeka wegirini, orenji, uye violet (kana pingi). Kune zvakare yakatsvuka tsvuku, yakafanana neiyo colorway inoshandiswa pane iyo yakatsvuka Galaxy Note 20, kujoina yakasviba bhuruu, uye chena sarudzo.
Maererano ne WinFuture, iyo foni ichasanganisira chena, bhuruu, orenji, lavender, girini, uye mutsvuku colorways. Iko kuwanikwa kwemavara akasiyana-siyana kunogona kusiyana zvichienderana nemodeli (zvimwe pane izvo pazasi). Chinyorwa ichi chinowedzera kuti foni iyi 8.4mm gobvu uye inorema 190g.
Mifananidzo yakadhindwa ne Jimmy Ndiye Promo ratidza foni musango kekutanga (ona pamusoro). Mifananidzo yacho inoratidza mabhezeri anooneka, kamera yeshure katatu, uye yepakati-yakaiswa punch-hole cutout. Iyo YouTuber yakajekesawo kuti chishandiso chine purasitiki kumashure.
Asingamire pazvakanyarara, Jimmy Is Promo akaisa vhidhiyo yakazara-mavhidhiyo kuYouTube musi waGunyana 19, yaisanganisira rundown remafoni uye software, uye saizi kuenzanisa neS20 uye S20 Ultra. Vhidhiyo yacho inosiya zvishoma kumafungiro, uye iwe unogona kutarisa zvimwe kufukidzwa kwaro pano.
Specs uye maficha
Iyo Samsung Galaxy S20 Fan Edition inogona kuve nemhando nhatu dzakasiyana. SM-G780 inonzi ichaburitsa pasirese ine uye isina 5G. Zvichakadaro, SM-G781 inongowanikwa chete ne5G. Mhando dzese dzinotarisirwa kuratidza Samsung iri kuuya Rimwe UI 2.5 ganda rakapetwa pamusoro Android 10.
Izvo zvambotaurwa kudonha kubva WinFuture inonyora pasi ese maficha eGlass S20 FE uye zvakare inosimbisa kuti ichave ese ari maviri 4G uye 5G mamodheru.
Sekureva kwechinyorwa, iyo 5G modhi yefoni ichave inofambiswa neiyo Snapdragon 865, nepo 4G musiyano icharatidza Samsung chaiyo Exynos 990 SoC. Izvi zvakare zvaimbopotserwa kuburikidza neakadonhedza mabhenji ezvinyorwa akafumurwa ne GSMArena.
Kusiyana nefoni dziripo dzeGPS S20 dzinongowana chipset cheSpapdragon muUS nedzimwe nzvimbo dzepasi, iyo Snapdragon 865 vhezheni yeSamsung Galaxy S20 FE inonzi zvakare inotangisa muEurope. Iyo dunhu inowanzo kuwana chete Exynos-inofambiswa Samsung mireza, saka ichi chingave chinogamuchirwa shanduko.
Panyaya yekuratidzira, iyo Galaxy S20 FE ine runyerekupe rwekuisa 6.5-inch Super AMOLED skrini ine 2400 x 1080 pixel resolution, 120Hz zororo reti, uye iri-inoratidzira chigunwe chemunwe. Izvi zvinoita kuti kuratidzwa kwefoni nyowani kukura zvishoma kupfuura base 6.2-inch S20, asi idiki pane iyo 6.7-inch Galaxy S10 Lite. Iri zvakare kupa inomhanyisa yekuvandudza mwero kupfuura iyo vanilla Galaxy Note 20 iyo inongowana 60Hz skrini. Samsung sezviri pachena yakashandisa iyo yakura kwazvo Corning Gorilla Girazi 3 pamusoro pechiratidziro kuchengetedza pamitengo.
Zvekufungidzira, a 20 Chikunguru mushumo na The Elec pamwe ne WinFuture inodonhedza runhare runogoneka kamera yekumisikidza. Makamera matatu ekumashure akaiswa kuti aoneke, asi hapana chiratidzo cheiyo 64MP sensor kana 108MP sensor zvachose. Panzvimbo iyoyo, vashandisi vanogona kufanirwa kugadzirisa 12MP yekutanga snapper ine f / 1.8 aperture, 12MP 123-degree wide-angle kamera, uye 8MP telephoto kamera ine 3x zoom. Iyo huru 12MP sensor inoratidzira huviri chikamu chekuona autofocus uye yeanomirira mufananidzo kudzikamiswa. Iyo 32MP selfie kamera yakagadzirirwa kuiswa mune yepunch-hole.
Leaker Ice Universe mune Tweet yakaratidza kuti iyo Galaxy S20 Fan Edition inoshandisa iyo Sony IMX555 sensor inoshandiswa zvakare paGPS S20, Galaxy S20 Plus, uye Galaxy Note 20. Rekodhi rekodhi rekodhi harina kana nyaya asi WinFuture yakasimbisawo ruzivo urwu mukuzara kwaro kuzere.
Kumwe kunhu, iyo Galaxy S20 FE inotarisirwa kuwana Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, uye NFC. Foni iyi inonzi zvakare IP68 yakasimbiswa kuchengetedza mvura uye guruva.
ETNews uye SamMobile yakambotaurwa kuti 6GB ye RAM uye 128GB yekuchengetedza inogona kuratidza zvakare. Izvi zvaive zvakare zvakanyorwa mune yekufungidzira dutu rakaburitswa ne WinFuture. Kana iyo Galaxy S10 Lite iri chero chiratidzo, isu tinogona zvakare kutarisira 512GB yekuchengetedza sarudzo ine ingangoita 8GB ye RAM.
Onawo: Mafoni akanakisa ane 8GB ye RAM
GalaxyClub yakambotaurwa kuti iyo S20 Fan Edition inogona kuisa bhatiri rakatemwa pa4,500mAh. Iko 500mAh yakakura kupfuura base S20. WinFuture zvakare inoshuma zvakafanana uye inowedzera kuti foni ichawana 15W charger, isina waya kuchaja, uye kudzoreredza kuchaja.
Iyo Galaxy S20 FE yakaonekwa zvakare ichipfuura neChina's 3C munaGunyana 4 (kuburikidza MyFixGuide). Rondedzero yacho inofanidza iro rakaburitswa bhatiri ruzivo pamusoro.
Iyo Galaxy S20 FE yakapfuura kuburikidza neBluetooth certification munaGunyana 2, iyo yakasimbisa kutsigira kwayo kweBluetooth 5.0 uye zvakare kujekesa mamwe emhando dzakasiyana dzatinogona kutarisira kuona.
Kutonga na iyi rondedzero, Verizon ichaita senge inogamuchira Ultra-wideband mmWave 5G zvakasiyana, zvinosiyaniswa neS20 FE UW label uye VZW tsananguro. Kunyanya AT & T uye T-Mobile misiyano iri kuuyawo zvinoenderana ne ichi chinyorwa chinyorwa. Chekupedzisira, kana iwe uri mumwe wekuda kupfuura imwe SIM kadhi panguva imwe, mbiri SIM musiyano inogona zvakare kunge iri mumabasa ekutonga ne nzvimbo ino. WinFuture zvakare inoshuma kuti foni ichave nerutsigiro rwe nano-SIM uye eSIM.
Kazhinji reaker Evan Blass akatumira iyo Galaxy S20 FE peji yechigadzirwa pakati paGunyana, ichisimbisa toni yezvinhu. Kubva pane iyo Snapdragon 865 processor, 128GB yekuwedzera inochengeterwa, uye 30x zoom, kune 120Hz OLED skrini, IP68 chiyero, uye waya isina waya, peji yechigadzirwa inoratidza zvese. Unogona kuverenga yakazara rundown nechekuno.
Vhidhiyo inofungidzirwa yekusimudzira yeGPS S20 FE yakapaza munaSeptember 21 kuburikidza netipster Abhishek Yadav, ichidonongodza dhizaini yefoni uye maficha.
Samsung S20 FE Promo Vhidhiyo. pic.twitter.com/8G7o1WYka0
- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 21, 2020
Hapana chakanyorwa pano chatisati tambonzwa, kusanganisira 4,500mAh bhatiri uye microSD kadhi slot, asi zvinozivikanwa kuti Samsung yekushambadzira inotsvedza mune ino clip hinges pane iyo FE kamera kamera, hupenyu hwebhatiri, uye simba rekuchengetedza.
Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Mitengo uye kuwanikwa
Saka, ndirini paunogona kutora imwe yeaya maFan Editions? ETNews munaJune vakakurudzira kutanga kwaGumiguru musi wechigadzirwa.
Chirevo chakambotaurwa na The Elec yakasimbisa kutanga kwaGumiguru asi zvakare yakawedzera mutengo wakataurwa: $ 750 Ipo izvi zvaizoita kuti S20 Fan Edition ive yakachipa pane iyo Galaxy S20's $999 pakutanga, kungave kuri kuwedzera kwakanyanya pamusoro peiyo Galaxy S10 Lite's $ 650 mutengo pakuvhura uye iyo ~ $ 450 Galaxy A71.
Kubuda kutsva ne DealnTech (via SamMobile) inojekesa iyo Galaxy S20 FE inonzi yeCanada yemitengo info. Mukudonha, vatengi vachada fork kunze kwakatenderedza CA $ 1,148 (~ $ 887) yeiyo 128GB / 5G modhi. Mutengo iwoyo wakakomberedza CA $ 150 yakaderera pane iyo S20 5G yekutanga mutengo muCanada.